कला / मनोरन्जन खबर Archives - Page 27 of 28 - www.kchhakhabar.com
मेरी बास्सैका कलाकारहरुले शुरु गरे नयाँ टेलीसिरियल (भिडियाे)सहित
काठमाडौँ । रोकिएको मेरी बास्सैका कलाकारहरुले नयाँ टेलीसिरियल खित्का डटकम सुरु गरेका छन् । सुरबिर पण्डित (दाह्री बा), पल्पसा डंगोल (चम्सुरी) लगायतका कलाकारहरुको सशक्त अभिनय रहेको खित्का डटकमको दोस्रो भागमा लागू औषधमा लाग्ने युवकका कारण परिवारले झेल्नुपरेको समस्यालाई मुख्य रुपमा उठाइएको छ । रामचन्द्र अधिकारी, शम्भु थापा, सुरेश थापा, अनिता दंगाल, नेत्र राउत लगायतका कलाकारहरुको अभिनय रहेको टेलीसिरि...
बर्दिवासमा धुर्मुस सुन्तलीलाइ स्वागत
बर्दिबास ।मुसहर बस्ती बनाउन धुर्मुस (सिताराम कट्टेल) महोत्तरीको बर्दिबास आएका छन् । उनी आउने खबरले मुसहर बस्तीकी एक सय पाँच बर्षीया मरनी सादा मंगलबार विहानै देखि खुशी थिइन । बिहानै देखि उनी बाटो कुरेर बसेकी थिइन् । धुर्मुस आएपछि हातमा राखेको माला र अविर उनलाई लगाई दिएइन् ।मरनी बर्सौंदेखि बाख्रा बाँध्ने खोरमै सुत्दै आएकी छन् । कठ्यांग्रिदो जाडोमा भूइमै पराल ओछ्यार र बोरा ओढेर रात काट्दै छिन् । ...
‘हात्तीको जस्तो देखाउने एउटा र चपाउने दाँत अर्कै ।’ उनका पछिल्ला गतिविधी र व्यवहार हेर्दा यस्तै लाग्छ । समाजसेवाको खोल ओडेर उनले चलाइरहेको धन्दा के हो ? वीर अस्पतालको हाताभित्र रहँदा जे भोगे,जे देँखे आज लेख्दैछु समाजसेवी दीक्षा चापागाइको चरित्र । मेरो नाम पवित्रा लामा ,घर काभ्रे । रहरै रहरमा रेडियोमा बोल्न थालेको तीन वर्ष पूरा भइसकेछ । धुलिखेलमा रहेको ग्रेस एफएममा कार्यक्रम चलाँउथे । त्यही भेटि...
काठमाडौं, ९ पुस – चर्चित हास्य टेलिचलचित्र ‘मेरी बास्सै’मा बान्द्रेको भूमिकाबाट चर्चामा आएका कलाकार सुरज चापागाईंलाई उनको वास्तविक नामबाट चिन्ने दर्शक कमै छन् ।‘मेरी बास्सै’को प्रसारण बन्द भएपछि झण्डै दुईवर्ष टेलिभिजनको पर्दाबाट हराएका सुरज त्यतिञ्जेल गुमनाम जस्तै रहे । बिहेको खबरसँगै भने उनी एकाएक चर्चामा आए । एककिसिमले बिहेले उनलाई फेरि चिनाउन झन् ठूलो मद्दत गरेको जस्तै भएको छ । उनी ‘मेरी बास...
काठमाडौं । दीपाश्री दिपकराजलाई स–सानो कुरामा केयर गर्छिन् । दिपकराजले पनि उसरी नै केयर गर्छन् । हिजोआज त पशुपतिको डाँडामा ध्यान गर्न पनि एकाबिहानै सँगै पुग्छन् । उनीहरुको मित्रताको डोरी निकै बलियोसँग गाँसिएको छ । कतिबेला को कहाँ छन् भनेर अपडेट भइरहेका हुन्छन् उनीहरु । यति लामो समयम्म सम्बन्ध टिकिराख्नुको कारण बताउँछन् दीपकराज, ‘एक त हामी लेडिज जेन्स भएकाले प्रगतिप्रति कसैको इर्ष्या हुँदैन ।अर्को क...
एक बिहानै १० जना कलाकारले आफ्नो परिचय बदले
एक पछि अर्काे गर्दै कलाकारहरुको पार्टी प्रबेशको कार्य धमाधम भईरहेको छ । त्यस्तै बुधबार बिहानै कांग्रेस सभापति देउवा निवास पुगेकी नाईका रिस्ता बस्नेतले पनि नायिका बाट आफ्नो परिचय बदलेकि छन । उनी अब नायिका मात्र होइन कांग्रेस सदस्य पनि भएकी छन् । होस्टेल अर्धकट्टी, आधापेज लगनयतका चलचित्रमा अभिनय गरेको नायिका बस्नेत चलचित्र होस्टेल बाट चर्चामा आएकी थिईन । निर्देशक रमेश बुढाथोकी सहित १० कलाकार एकाव...
यस कारण आत्महत्याको योजना बुने कलाकार इकुले
काठमाडौँ – कलाकार सुलेमान शंकर ‘इकु’ जब उनकी श्रीमतीले उनलाईै छोडेर गइन् । उनी भन्छन् त्यही दिन घरबाट फोन आयो । मेरी पत्नीको बारेमा नराम्रो खबर सुने । प्रेम गरेर बिहे गरेकी श्रीमतीले पनि मलाई धोका दिई । एकातिर फिल्म डुब्नुको पीडा, अर्कोतिर पत्नी पीडा, साह्रै दिक्का लाग्यो । मलेसिया र सिंगापुरको बीच्को पुलबाट हाम फालेर आत्महत्या गर्ने योजना बनाएँ । तर, मैले झट्ट सम्झिएँ – दर्शकले मलाई दिएको माया । ...
जानी राखाै ! यिनै हुन सैसारलार्इ हल्लाएाका महिलाहरू
विश्वकै शक्तिशाली देश अमेरिकाले किन महिलालाई राष्ट्रिपतिको रुपमा स्वीकार गर्न सकेन ? अहिले विश्वभर एउटा गहन प्रश्न खडा भएको छ । महिला पुरुष बराबर भनिएको देश अमेरिकाले अहिलेसम्म महिला राष्ट्रपति पाएको छैन । इतिहास रच्ने ठानिएकी हिलारी क्लिन्टनलाई बहुलठ्ठी ठानिएका डोनाल्ड ट्रम्पले पराजित गरेपछि अमेरिकी जनताले महिला नेतृत्वलाई अस्वीकार गरेको रुपमा पनि अर्थाइएको छ । हिलारीको हारपछि सामाजिक सञ्जालमा...
८ वर्षकै उमेरमा दिदीहरुसंग ब्लु फिल्मी हेरेँ : मोडल सुजना
मोडल सुजना ढकालसंग नेपालपाटी डट कमले गरेको कुराकानीः कलाकारिता क्षेत्रमा कसरी लाग्नुभयो ? टीभी धेरै हेर्थे । मलाई रेखा थापा र नम्रता श्रेष्ठ धेरै मन पर्ने । उहाँहरुलाई देखेपछि मलाई पनि यस्तै हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्थ्यो । एसएलसीपछि भिडियोहरु गर्न थाले । यसरी नै म अगाडि बढ्दैछु । पहिलो संयोग कसले जुराइदियो ? रेजिना रिमाल र आकांक्षा बत्स्यालको म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरेपछि अफरहरु धेरै नै आउन ...
सधै नै चर्चा र विवादमा रहन्छिन्, गायिका ज्योती मगर । गायनको अतिरिक्त मोडलिङमा समेत सक्रिय ज्योतीलाई अश्लिलता फैलाएको आरोप पटक-पटक लाग्ने गरेको छ । तर उनी यस्तो आरोप पटक्कै स्विकार्दिनन् । बरु आफूलाई ‘बोल्ड वुमन’ भन्न रुचाउँछिन् । प्राय म्युजिक भिडियोमा छोटा र पारदर्शी पोशाकमा प्रस्तुत हुने ज्योतिलाई अनलाइनखबरले लगाएका पाँच आरोपः १. जवानी देखाएकै भरमा करिअर टिकाउनु भएको छ हैन ? यो बेकारको आरोप हो...